Muxamaduu Buhari oo si kulul uga hadlay afduubkii shalay 317 gabdho iskuulay ah loo geestay.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Muxamaduu Buhari oo si kulul uga hadlay afduubkii shalay 317 gabdho iskuulay...
Muxamaduu Buhari oo si kulul uga hadlay afduubkii shalay 317 gabdho iskuulay ah loo geestay..
Bayaanka madaxweynaha ayaa dabasocday afduubka 317 gabdho iskuulay ah oo Jimcihii laga afduubtay iskuul ku yaal waqooyi galbeed Nigeria.
Bayaan oo ku qornaa luuqad adag ayuu madaxwayne Buhari ku sheegay in dowolad goboleedyada dalkaasi laga doonayo in ay dib u eegis ku sameeyaan nidaamyadooda ah in dambilayaasha lagua baalmariyo lacago iyo gawaari,.
Waxaa uu madaxwaynaha ku celiyay oo kali ah wax sanooyiin badan uu sheegayay mamaulkiisa, taasi oo ah in aysan wadaxaajood la gali doonin burcadda afduubyada geysta.
Iyada oo ay arrintan jirto ayaa waxaa hadana sare u si kacay caruurta iskuuleyda ee afduubka loo geysanayo.
Afduubkii ugu dambeeyay ee ka dhacay goobta lagu magacaabo Jangebe, ayaa waxaa uu dadka dib u xusuusinayaa , afduubkii 2014 loo geystay 276 gabdhood oo oo dhiganayay iskuul ku yaalla magaalada Chibok.
Mr Buhari ayaa sheegay in uusan nasan doonin ilaa gacanta looga soo dhigayo gabdhihii laga afduubtay Chibok.
Balse waxaa wali la la’yahay in ka badan 100 gabdhood islamarkana waxaa tiradaasi ku sii biiray tiro kale oo la afdubtay.
42 qof oo laga afduubtay gobolka Niger todobaadkii aanu soo dhaafnay ayaan sidoo kale wali la soo badbaadinin.
Khasaaraha ugu wayn arrintan ayaa waxa ay soo gaartay waxbarsahada, maadama dhowr mar ay weeraro ka dhaceen iskuulada ku yaalla waqooyiga Nigeria.
Previous articleMidoowga Musharaxiinta ma aqbali doonaan sharuudaha lagu xiray Banaanbaxa ay qabanayaan
Next articleCaasimadda Muqdisho oo mudooyinkii danbe ka mid noqotay meelaha ugu ciriiriga badan afrika. ..
Wararka ka imaanaya Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in go’doon ay saareen kooxda Alshabaab iyo ciidamada Kenya oo qeyb ahaan meel ka...